सिङ्गापुर केपीलाइ भेट्न भेट्न जान लागेका एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्ट, मापसे गरेर अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै विमानबाट निकालिए , लज्जित हुँदै भट्टले यो भने – PanchKhal Online
Home/समाचार/सिङ्गापुर केपीलाइ भेट्न भेट्न जान लागेका एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्ट, मापसे गरेर अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै विमानबाट निकालिए , लज्जित हुँदै भट्टले यो भने
सिङ्गापुर केपीलाइ भेट्न भेट्न जान लागेका एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्ट, मापसे गरेर अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै विमानबाट निकालिए , लज्जित हुँदै भट्टले यो भने
काठमाडौं । उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न सिंगापुर जान लागेका गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएन) का अध्यक्ष भवन भट्टलाई सिल्क एयरको विमानबाट निकालिएको छ । मदिरा सेवन गरेर अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै अध्यक्ष भट्टसहित सञ्चारकर्मी सनत न्यौपानेलाई विमानबाट निकालिएको हो । सिल्क एयरलाइन्सको फ्लाइट नम्बर एसएलके ४१३–कल साइन एमआइ ४१३) विमानमा शनिबार बिहान साढे दश बजे चढेका थिए ।
विमान दलमा रहेका सदस्यहरूलाई अभद्र व्यवहार गरेपछि एयरलाइन्सले विमानस्थल प्रहरीको सहयोगमा विमानबाट निकालेको विमानस्थल व्यवस्थापनले बताएको छ ।
उनीहरूले सो विमानका कर्मचारीका अलावा विमानस्थल कर्मचारी एवम् ड्युटीमा रहेका प्रहरीहरूलाई समेत अभद्र व्यवहार गरेको प्रहरीको आरोप लगाइएको छ ।
विमानबाट निकालिएपछि भट्टको साथमा सिंगापुर उड्न लागेका सनत न्यौपानेले आफ्नो कारणले डिपोर्ट गरेको भनेर समाचार आएको भन्दै फेसबुक लाइभमार्फत आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। यो कुरा सार्वजनिक भएपछि न्यौपानेले फेसबुक लाइभमार्फत घटनाक्रमबारे विस्तार जानकारी दिएका छन् । न्यौपानेका अनुसार भट्ट र उनी त्यो दिन सँगै थिए । उनीहरु बिजनेस मिटिङहरुमा सहभागी थिए । त्यसैक्रममा मदिरा सेवन गरेको उनले स्वीकारेका छन् ।
न्यौपानेका अनुसार इमिग्रेसन पास भइसकेपछि प्रि बोर्डिङबाट अगाडि बढ्ने क्रममा सेक्युरिटीले पनि सुरुमा उनीहरुलाई रोकेको थियो । तर, पछि फेरि ‘हाम्रो गल्ती भयो’ भनेर सेक्युरिटीले त्यहाँबाट पनि जान दिएपछि प्लेनमा गएर बसेको उनको भनाइ छ । प्लेनको सिटमा बसिसकेको यात्रुलाई ओरालेर एयरलाइन्सका कर्मचारीले आफूहरुको बेइज्जत गरेको न्यौपानेको आरोप छ
कस्तो छ अहिले चितवन ? एकातिर विप्लव माओवादीको बन्द अर्को तिर रवि समर्थकको प्रदर्शन
जनताको भोटले वडाअध्यक्ष बनेका घिसिङ डिभी परेर अमेरिका उडे [५ महिनापछि पठाए राजीनामा]
बालगायकद्वय आयुष र प्रितम रियालिटि शो ‘सारेगमप’ को सेमिफाइनलमा
श्रीमानहरु विदेशमा यता श्रीमतीहरुलाई परपुरुषले यस्तो तनाव दिन थालेपछि …. !
शालिकरामले भिडियो नाम लिएका युवराज कंडेलले पनि मुख खोले पुरा पढ्नुहोस